Archive du 20171009
Vaky ny Fonjan’i Tsiafahy Gadra 5 tafatsoaka
Gadra miisa 5 no namaky tamboho, ary tafatsoaka tao amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ny sabotsy 7 oktobra alina hifoha omaly alahady.
Fitondrana HVM Manararao-pesta
Ny volana aogositra 2017 teo no nanomboka tafiditra teto amintsika ny valan’aretina pesta saingy somary nafenimpenina tamin’izany, raha fintinina ireo fampitam-baovao.
Mponina ao Mahitsy Mahatsiaro hiharan’ny tsindry hazo lena
Tanteraka ihany na dia efa notoherin’ireo mponina teny an-toerana aza ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filoham-pokontany ao Ankazo sy ny vaovao notendren’ny fitondram-panjakana handimby azy ny sabotsy teo.
Taratasy ho an’i Jean Inona no manaraka ?
Miarahaba Jean o! Arakay daholo foana moa izany ilay fikanareo saingy fotsiny tsy afa-manoatra izahay satria matahotra vanja mipoaka ee!
Vovonana CTM – SSM “Tokony hatsahatra ny asa marefo !”
Fanontaniana lehibe napetraky ny vovonan’ireo sendikan’ny mpiasa eto amintsika na ny CTM-SSM nandritry ny hetsika fanamarihana ny andro ho an’ny asa mendrika izay hankalazaina amin’ity volana oktobra ity ny
Fiaraha-miasan’ny CNaPS–FJKM Nitohy tany Toamasina
Ny Synodam-paritan’i Toamasina no nanohizana ny fiaraha-miasa eo amin’ny CNaPS (na ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy) sy ny FJKM (na ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara).
Fananganana ny Kolejy Teolojika Manome toky ny FJKM Ravalomanana
Niatrika ny famaranana ny fihaonamben'ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana notanterahina teto tao amin’ny Kianja Monisipaly Antanetibe Mahazaza ny filohan’ny komity fankalazana ny faha-50 taonan’ny FJKM, Marc Ravalomanana omaly.
Fifandrifian-javatra sa …
Valan’aretina pesta izao no malaza eto amintsika, ary miezaka mamono afo manoloana ny tsy fahafehezana azy io ny fanjakana ankehitriny.
Halatra razana matin’ny pesta Olona 50 nosamborina tany Toamasina
Loza mitatao hafa indray no iainan’ny vahoakan’i Toamasina mikasika ny valan’aretina pesta, indrindra taorian’ny fahafantarana fa nisy nangalatra tao anaty lavaka nosaronana vato sy simenitra tao amin’ny toeram-pandevenan’i Manangareza,
Fiparitahan’ny pesta Hanome vaovao tsy tapaka ny BNGRC
Birao misahana ny fitantanana sy fiomanana ary fisorohana ny loza voajanahary no antom-pisian’ny BNGRC. Omaly no nahenoana voalohany fa ho loharanom-panovozam-baovao mikasika ny fivoaran’ny aretina pesta ihany koa izy.
Mihanaka hatrany ny Pesta Efa tonga any Mahabo sy Betioky atsimo
Tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny olona matin’ny pesta sy ireo mitondra ny valan’aretina eto Madagasikara. Raha ny tatitra farany navoakan’ny minisiteran’ny fahasalamana ny sabotsy 7 oktobra lasa teo,
Sehatry ny fizahantany Ahiana hitotongana
Manahirana ho an’i Madagasikara amin’izao fotoana ny mahita mpizahatany hatrany amin’ny 300.000 isa isan-taona raha toa ka manodidina ny 1,3 tapitrisa isan-taona ireo tonga isan-taona ao Maorisy,